ကျွန်တော်ပြောပြချင် တာကတော့ စုပေါင်းငွေရှာ ဘလောက်ဂါဆို တာလေးပါဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ နေရာအနှံ အပြားရောက် ရှိနေတဲ့ ဘလောက်ဂါများမှ ရောင်းချလိုသော ပစ္စည်းများနှင့် ဈေးနှုန်းများကို တင်ထားပေးပြီး ရောင်း ချနိုင်အောင် စီစဉ်သွားပါမယ်။
စင်င်္ကာပူမှ ပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်မှလိုချင်စရာ များကို စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား စတဲ့ သုံးနိုင်ငံ ၀ယ်ရောင်း ပြု လုပ်နိုင်မယ့် ပုံစံပြုလုပ်လိုပါတယ်။ web site တစ်ခုတင်ထားပေးပြီး အရောင်းပြခန်း ဖွင့်ပါမယ်။ ရန်ကုန်ဘက် အပိုင်း ကို ကျွန်တော်မှ တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာနေ ရာတွေက တာဝန်ယူပူး ပေါင်းလိုသည့် ကျွန်တော့် ချစ်လှ စွာသော ဘလောက်ဂါများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အကြံ ဥာဏ်များနှင့် ဝေဖန်ပြောဆို မှု့များကိုလဲကြိုဆို ပါတယ်။ ဒါမှဘဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာ ၀ယ်ရောင်း siteဖြစ်လာမှာပါ။ အထူးသဖြင့်ဈေးနှုန်းများ ကို သင့်တင့် သက်သာတဲ့ နှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချစေချင် ပါတယ်။
ကိုဘလာဂေါက်။ ကြိုက်ပြီဗျို့။ ဒါမျိုးလုပ်ချင်နေတာ ကြာပြီဗျ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု သိပ်မရှိလို့။ သိပ်လည်း နားမလည်သေးဘူးထင်တာကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ငွေဘယ်လိုလွှဲမယ်။ ပစ္စည်းဘယ်လိုပို့မယ်ဆိုတာတွေ စဉ်းစားထားပြီးသား ရှိပါသလားဗျာ။ Express Services (DHL, TNT,...) လိုမျိုးကနေ ပို့မလား။ စာတိုက်ကြီးကနေပို့မလား။ ငွေကိုရော online လွှဲဖို့နဲ့ ဟွန်ဒီ လွှဲဖို့ အကုန်လုံးအဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(များ)စဉ်းစားမယ်ဗျာ။ ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့ online ကြည့်လို့ရနေရင် နှိုင်းယှဉ်သိနိုင်မှာပါ။ အမြတ်များများ ရဖို့ ဈေးကြီးတင်ရောင်းမယ် ဆိုတာထက် လိုအပ်နေတဲ့သူတွေ အချင်းချင်း ဖလှယ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပိုနေတဲ့သူတွေ ပြန်ရောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်အနီးအနားမှာ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပွဲခအနည်းငယ်ယူပြီး ပြန်ရောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးက အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းပို့တဲ့အပိုင်းမှာ DHL, TNT တို့က ဈေးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး တစ်ခု ကျွန်တော် ကြားဖူးတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရ မရ တော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဘာလဲဆိုတော့ ပစ္စည်းပို့ရင် မူလ DHL, TNT လို ကုမ္ပဏီနဲ့ ပို့တာနဲ့ ကြားခံ Agent ဆီမှာ ပို့တာနဲ့ ဈေးကွာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်သူက သက်သာလဲဆိုတော့ Agent က ပိုသက်သာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့က ပစ္စည်းပို့ချင်တဲ့သူတွေ အများကြီး ဆီက ပစ္စည်းတွေစုပြီး ပို့တော့ Discount သဘောမျိုးနဲ့ Agent အတွက် ကော်မရှင်ခတွေနဲ့ နှုတ်လိုက်ရင် မူရင်း ကုမ္ပဏီတွေထက် ပိုပြီးသက်သာ သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ အတိအကျတော့ မသိပါ။ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ Agent ဆီမှာ သက်သာသလိုမျိုးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ နားလည်တဲ့ သူများရှိရင်လည်း ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ TNT မှာ အစ်မ ၀မ်းကွဲတွေ ရှိတော့ မေးပေးပါဆိုရင် သေချာ ပြန်ပြီး မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်း ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ မမေးတော့ပါဘူး။
အစီအစဉ်အသေးစိတ်လေးများ ပြောနိုင်တဲ့ အချိန်ကျရင်လည်း ပြောပါဦး။
ကြပါစို့။ တခြားသော စိတ်ဝင်စားမယ့် သူတွေကို
Ye Lin Ko said…
Interesting. You can contact me at anytime. I'm living in Yangon.
ဘလာဂေါက်ရေ.. အသေးစိတ်လေး ထပ်ရေးပြပါဦး ။ ဘာပဲဖြစ်၂ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကြတာမျိုးလေးက စိတ်ဝင်စားစရာပဲ ။
Wai Yan said…
၁ - ပစ္စည်းဘယ်လိုပို့မလဲ
၂ - ငွေဘယ်လိုရှင်းရမလဲ
၃ - ဘယ်လိုအရာမျိုးတွေကို ရောင်းကြ၀ယ်ကြမှာလဲ
၄ - အဲဒီ website တစ်ခုထောင်လိုက်ပြီဆိုရင် အလကားဝန်ဆောင်မှုပေးမှာလား
၅ - ပွဲခယူပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးမှာလား
၆ - ebay လိုမျိုး site တစ်ခုလား
ကိုဘလာဂေါက်ကြီးရေ... ဒီပွဲမှာ အနော်လည်း ၀င်နွှဲမယ်ဗျာ.
မူပိုင်ခွင့်တွေအတွက် ဘာမှ မပူနဲ့ မပန်ဒိုရာရှိတယ်. သူက ဒါမျိုးမှာ အိတ်စ်ပက်... ဟတ်ဟတ်ဟတ်.
ဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေလေးတွေ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာ...
စိတ်ဝင်စားတယ်.. ဆက်လုပ်.. ကိုယ်လည်း ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ကြည့်ကြတာပေါ့..:) :)
သစ္စာ | သ​စ်စာ said…
ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆွီဒင်၊ နော်ဝေး နဲ့ ဖင်လန်အတွက် ဈေးကွက်ရှာပေးမယ် ဒိန်းမတ်က သိပ်မရောက် ဖြစ်လို့ တာဝန်မယူနိုင်သေးဘူး။
ထိုင်းနိုင်ငံ အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော် တို့လည်း တာဝန်ယူ ပေးနိုင်ပါတယ်.. စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းကနေ မြန်မာပြည်ကို ကုန်အတု တွေချည့် လှိမ့်ဝင်နေတော့ အစစ်နဲ့ အတု ခွဲသိအောင် အရင် ပညာပေးပြီးမှ သွင်းလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ အတုတော့ သွင်းမပေး နိုင်ဘူးဗျ။ မြန်မာပြည်ထဲက ကုန်စည်တွေကို ထိုင်းမှာ ပြန်ရောင်းပေး ဖို့ကတေ့ာ ကြိုဆိုလျက်ပါ။ ထိုင်းက ခရီးသွား နိုင်ငံဆိုတော့ tourists တွေကြိုက်တဲ့ လက်မှု ပစည်းတွေ ဆိုရင် အိုကေ နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ ကိုလည်း လာလေ့လာ ကြည့်နိုင် မှတ်ချက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြိုဆို ပါတယ်ဗျာ
http://gp-greendecoration.blogspot.com/ and http://gpittour.blogspot.com/ ပါ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ